अझै किन सहज भएन श्रम स्वीकृति ? यस्तो छ कारण « Postpati – News For All
अझै किन सहज भएन श्रम स्वीकृति ? यस्तो छ कारण
मङ्सिर १३, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा श्रम स्वीकृति लिन आउने सेवाग्राहीले भोग्ने सास्ती अझै अन्त्य भएको छैन ।
श्रम स्वीकृतिका लागि गएको बिहीबारदेखि निरन्तर धाउँदा बल्ल बिहीबार आठ दिनमा श्रम स्वीकृति लिएको उनले ब। मिताएलन पहिलो पटक यस्तो स्वीकृति लिएर माल्टा जाँदै छन्। समाचारमा सुने वा पढेजस्तो एक दिनमै सहज रूपमा श्रम स्वीकृति पाउने अवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति उनले आक्रोश पनि पाेखे। ‘श्रम स्वीकृतिका लागि के के कागजात चाहिन्छ भन्ने थाहा नहुँदा आठ दिन लाग्यो तर बल्ल बल्ल स्वीकृतिचाहिँ पाएँ’, बिहीवार बिहान ४ बजे अँध्यारोमै श्रम कार्यालय पुगेको बताउने मिलनले भने।
यस्तै नौ वर्ष साउदी अरेबिया बसेर तीन पटक नेपाल आइसक्नुभएका चितवनका विनोद अधिकारीले आक्रोशित हुँदै भने, ‘नयाँ नियम हामीलाई थाहै थिएन । तीन/चार घण्टा लाइन लागेर डकुमेन्ट बुझायो, पुरानो सम्झौतापत्र खोइ भनेर सोध्छन्, पुरानो सम्झौतापत्र चाहिन्छ भन्ने के थाहा ? अहिलेसम्म माग्ने गरेको थिएन । कम्पनीमा फोन गरेर मगाएको छु, त्यसैको पर्खाइमा छु । शुक्रबार २ बजे फ्लाइट छ, तनाव भइसक्यो ।’ गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।